Boeny sy ny Delegasiona avy any Ouganda: tombotsoa iombonana no tanjona | Région Boeny
Tonga nanatontosa fitsidihana ara-pomba fanajana tao amin’ny Lehiben’ny Faritra Boeny Atoa Saïd Ahamad Jaffar, tao amin’ny biraony, Bloc Administratif Ampisikina, ny Talem-pitantanana ny orinasa BAKHRESA GRAIN MILLING (U) LTD ao Ouganda, Afrika Atsimo, Atoa Mohamed Saïd Bakhresa ny alatsinainy 15 may 2017.
Voaresaka nandritra ny fihaonan’ny roa tonta ny fanirian’ity mpitantana orin’asa vahiny ity hametraka orin’asa goavana iray eto anivon’ny faritra Boeny. Fanodinana varim-bazaha ho lafarina, sy toerana iray fanangonana katsaka eto Mahajanga no kasainy hatsangana amin’izany.
Araka ny fanadihadiana natao hoy ireto vahiny dia hita sy tsapa fa maro ny tolotra sy ny harena mbola azo trandrahana afaka hampandrosoana ny faritra Boeny. Izany indrindra no niantefan’ny safidin’izy ireo hampiasa ny volany eto. Ny tombotsoa iombonana hoy indrindra Atoa Mohamed Saïd Bakhresa no tanjona tratrarina amin’izao fitadiavana fiaraha-miasa izao.
Tsy hampiandry ela ary fa afaka herintaona monja dia hanomboka ny fananganana ny orinasa, ary kamiao miisa 200 no ho tonga eto an-toerana, ho ampiasaina hampiodinana izany orinasa izany. Noho ny orin’asa haorina eto antapom-tanànan’i Mahajanga, dia notronin’i Ben’ny tanàna, Atoa Andriatomanga Mokhtar Salim ny fifampidinihana.
Mialoha izao fitsidihana izao dia nisy ny fitsidihan’ireo vahiny ny tanànan’i Mahajanga niarahany tamin’ny Ben’ny tanàna. Tsikaritr’izy ireo ary fa manodidina ny fokontanin’Antanmbao Sotema, Fiofio, Antanimasaja, izay faritra indostrialy fahiny, no toerana metimety hananganan’izy ireo ny orin’asany ihany koa. Tany mirefy 10 ha eo ho eo moa no ilain’izy ireo amin’izany ary zanaky ny faritra manodidina ny 10 000 no horaisiny hiasa ao amin’ireo orin’asa hatsangany.
Ny Lehiben’ny Faritra manoloana izany dia tsy manakana ny fanajariana ireo orin’asa efa nikatona fahiny dia ny SOTEMA, ny FITIM ary ny SIB amin’ireo faritra indostrialy ireo. Nefa kosa nanantitrantitra ny tenany ny amin’ny tokony hanarahana an-tsakany sy an-davany ny lalàna velona misy eto amin’ny tany sy ny fanjakana eo amin’izany fananganana orin’asa izany.